ॐ हस्पिटलः लुटको अखडा, डाक्टर पापी – Enayanepal.com
आखिर कहाँ छ हामीलाई खुसी दिने त्यो भगवान् रु अनि कहाँ छ त्यो ईश्वर रु हामीलाई खुसी दिने एउटा अदृश्य शत्तिलाई मान्छौँ, कहाँ गए ति सब रु सपनाका महलहरु भत्किँदै गए, जिन्दगीमा अनगिन्ती चोटहरु थपिँदै गए, म सहँदै छु ।
रोडिकोट गाविसको नजिकैको गाउँमा कोठा लिएँ । कोठामा बसाईको पहिलो रात मेरो मानसपटकलमा बिचरण गरिरहन्छ । कोठा चिसो थियो, जमिनबाट पानी रसाउने, अनि अँध्यारो मान्छे नबस्ने । पहिलो रातभरी रोएरै ज्यालो बनाए । यो रुवाई एक एक महिनासम्म रह्यो । आमाले पकाएको खानालाई साँझ बिहान सम्झना आउथ्यो । आफ्नो पीडा बिसाउने ठाउँ थिएन ।
म एसएलसी पास भएपछि मेरा घरमा आमाबुबा दाई सबैको खुसीको सीमा नै थिएन । हामी पाँच दाईभाइमध्ये माइला दाई शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । मलाई दाइले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । आमाबुबाको भनेको मान्ने म बाहिरको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने जाँदा खाने कुरा मेरा लागि छुटयाएर राखिराख्नु हुन्थ्यो ।
प्रकृतिको नियम भनौँ वा अरु कुनै अदृश्य शक्तिलाई दोष दिउँ, मेरो दाईलाई यो संसारमा रहँनु भएन । सम्झिँदा पनि मन भक्कानिएर आउँछ, त्यो दिन जुन दिन मेरो दाइ यो संसार छोडेर टाढा जानुभएको थियो ।
२०७३ सालको भदौ १४ गते जस्तो दिन फेरि कहिल्यै कसैलाई पनि नआओस् । म केही दिनको लागि नेपालगञ्ज गएको थिए । त्यही समयमा मेरो मोबाइलको घण्टी बज्यो । हेर्दा फुपुको छोराले फोन गरेछ । उसले मलाई देखेर फोन गरेछ सोचे, मैले फोन उठाए । उसले ‘कता हुनुहुन्छ दाई’ सोध्यो, मैले नेपालगञ्ज छु । किन र के भो रु उसले मेरो भाई बिरामी भएको खबर सुनायो । म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ, होटेलको कोठामै एक घण्टासम्म बेहोस नै भएछु । केही समयपछि म आफैँ बिउँझिएँ । मेरो दिमागले काम गर्ने थालेछ । म उठेर नेपालगञ्ज नर्सिङ होममा पुगेँ । त्यहाँ मेरो भाई बेडमा बेसहारा जस्तो भएर पल्टिएको देख्दा मैले बोल्नै सकेन आँखाबाट बर्बरी आसुँ खस्न थाले ।
बल्लबल्ल आफुलाई सम्हाल्दै जानकारी लिएँ । भाईले हिजो राती एक्कासी खुट्टाको फिला दुख्यो अरु केही भाको छैन । मैले सामान्य होला सोचेको थिए । घरमा आमाबुबा कसैलाई पनि जानकारी गराएनौँ, सन्चो भईहाल्ला भनेर । जानकारी गराउँ भनेपनि घरमा फोन लाग्दैनथ्यो । मेरी ठूली बहिनीलाई मात्र भाई बिरामी भएको कुरा थाहा थियो । जब डाक्टर आएर सबै एमआरआईदेखि लिएर चेकजाँच गर्नुपर्ने सबै गरिसकेका थिए । रोग केही देखिएन । तर प्यारालाइसिस हुन सक्छ भन्ने जवाफ डाक्टरले दिएका थिए । जति सक्यो छिटो काठमाडौँ अथवा लखनउ लैजाने सल्लाह डाक्टरको थियो । म के गरौँ, कसो गरौँ भयो, पैसा पनि थिएन । एक छिनपछि बहिनीसँग सल्लाह मागे बहिनीले पैसाको लागि केही चिन्ता नलिनु उपचार राम्रो गर्नुहोला भनेपछि तालिमबाट बिदा मागेर निस्किए ।
मेरा भाइको बिराम एक हप्ता कुर्न पनि सक्ने थिएन । मलाई झन् धेरै चिन्ता हुन थाल्यो । फेरि टयाक्सी रिजर्ब गरि केएमसी हस्पिटलतिर लागे । अस्पतालका एक कर्मचारीसँग लाग्ने खचैबारे सोधेँ । दिनको ५ हजार । अर्को आयो र महिनौँ दिनसम्म राख्नुपर्छ भन्न थाल्यो अनि मैले आफू महिनौँ दिनसम्म राख्न नसक्ने भए पछि फेरि टिचिङ हस्पिटलमा ल्याएँ । ओहोरदोहोर गर्दागर्दै पैसा पनि धेरै सक्किसकेको थियो । समयमै उपचार पाएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन । म कहाँ के गरुँ अलमलमा परेँ । न खानु छ न पिउनु, भोकभोकै बिरामी भाइलाई बोकेर हिँडेको हिँड्यै छु । बल्ल तल्ल पालो कुरेर नाम दार्ता सम्म भएपनि बेडको भने व्यवस्था हुन सकेको थिएन । धौँधौँ दुई जना भएको बेडमा भाइलाई राखेँ । भाई छटपटिएको देख्दा मन मुटु टुक्रा टुक्रा भएर आउँथ्यो तर पनि मैले केही गर्न सकेको थिएन ।
मिल्ने भए भाईले भोगिरहेको पीडा मैले लिन्थे । तर‘बल्लबल्ल अस्पतालमा अस्पतालमा राति मेरो भाईलाई सारै ज्वरो आयो अनि नर्सहरुलाई सोधे सिटामोल खुवाउनु होस भनेपछि मैले भाइलाई सिटामोल दिएँ । आफन्तीहरु अरु कोही थिएनन् भाइ र म बाहेक । अरुका त एक जना बिरामी कुरुवा २ जना अनिवार्य हुदा रहिछन । हाम्रो त सम्भवै थिएन । जब बिहान भयो भाईलाई भोक लागेको रहिछ दुध ल्याएर खुवाएँ अनि फेरी पछि अनि केही बेर फ्रुटि ल्याएर खुवाएँ । त्यतिबेला त भाई मसँग राम्रै कुरा गरिरहेको थियो । अलिपछि खाना पनी खायो । केही समय पछि दाई मोबाइल दिनु भन्यो फेसबुक चलाउछु भन्यो अनि फेसबुक चलायो र ओन्स अपन अ टाईम फिलीङ स्याड भन्ने क्याप्सन लेखेर आफ्नो फोटो अपलोड गर्यो । घरमा अरु कसैको फोन लाग्दैनथ्यो तर एउटी बहीनीको भने लाग्थ्यो अनि उसैसँग कुराकानी गर्छु भन्यो र मैले फोन लगाईदिएँ कुरा पनि गर्यो ।
यत्तिकैमा उस्को छट्पटी बढ्दै गयो । उ बिस्तारै बेहोसी अवस्थामा पुग्यो । म आत्तिएँ अनि डक्टरलाई बोलाएँ, डाक्टर सँग सल्लाह मागेपछि आइसियू मा राख्नु पर्छ भने । अनि मैले ठाउँठाउँमा फोन गरे आई कहिँ कतै आईसियू पाइएन । बल्ल काठमाडौँ हस्पिटलमा लिन लागेको थिए एकजना इण्डियन मुलका डाक्टर आए । भाइलाई बाहिर लैजान लागेको थाहा पाएपछि एक छिन रोक्न भने । उनले टिचिङ अस्पतालमा नै आईसीयुको व्यवस्था गरिदिए । अनि भाईलाई आईसीयुमा राखियो । मेरो भाई छटपटाई रहेको थियो । भाइको अवस्था त्यस्तो न घरमा केही खबर छ न केही मेरो दिमागले काम गर्ने छोडेको थियो । सहयोग गर्ने मान्छे कोही थिएनन् । कसलाई के भनेर सहयोग माग्नु । निष्ठुरी शहरमा । आफ्नो पासमा पैसा सकिन थालिसकेको थियो । डाक्टरले औषधि मात्रै ल्याउन पठाई रहेको थियो । जब रातीको साढे बाह्रबजेपछि औषधि मगाउन रोके । अनि खाना खानु प¥यो भनि अस्पतालबाट बाहिर गएँ तर केही पनि थिएन खाने चिज । सबै पसलहरु बन्द भईसकेका थिए । त्यो दिन भोकै बसे भोली पल्ट शनिवार थियो । औषधि किन्दा किन्दै पैसा पनि सकियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्ने डा। गोविन्द केसीले आफूले पढाउने अथवा काम गर्ने अस्पतालभित्रको अवस्थाबारे जानकारी नभएको हो कि ? देखेर पनि बेवास्ता गरेका हुन् ?
केही उपाय ननिकाली अस्पताल बाहिरका फार्मेसीमा गए । उता पनि केही उपाय सुल्झिएन । एक जना भलाद्मी जस्तो देखिने उमेरको हिसाबले पनि पाको व्यक्तिसँग आफ्नो समस्या राखे । उनसँग मेरो मोबाइल र लाइसेन्स राख्नु होस् भन्दा पनि मानेन् । उनले मेरो पीडा सुनेन् । मेरो भाइको ठाउँमा उनीहरुका आफन्त भएको भए के गर्थे होला उनीहरु रु यो सोच्ने फुर्सद कसैलाई थिएन । आखिर पैसामात्रै त रहेछ सम्बन्ध ।
मेरा आँखले संसार देख्न छोडे, चारैतिर अँध्यारो र भाई अनुहार मात्रै देखिराखेको थिए । फेरि १ जना नर्स आइन बिल काटेर ल्याएर आउनु भनिन् । डाक्टरले अब औषधि नगर्नुहोस् भनिसकेका थिए । तर नर्सले बिल काटेर ल्याएर आउनु भनेपछि ति दुईवटी दिदीहरुले ति नर्सलाई रिसाउँदै यो भाईसँग पैसा छैन, कहाँबाट बिल काट्ने हो रु खर्च किन गराउछौँ रु डाक्टरले ब्रेनडेथ भईसकेको र औषधि उपचार रोक्नु होस भनिसकेको छ भनिन् । यतिबेला सम्म भाईले संसार छाडिसकेको रहेछ तर पनि मलाई अस्पतालले बिल कटाउन लगाउँदै थियो ।
मैले फेरि काठमाडौँबाट एक्लै फर्कनु पर्यो । दाई र पछि भाईसँगको सहकार्यको अन्त्य भयो । आफ्नो मनलाई बलियो बनाउनुछ भन्दा पनि भाईको विगतले मलाई निकै कमजोर बनायो । मेरो भन्दा पनि आमाबुबाको चिन्ता लाग्यो । कसरी सम्झाउने भनेर ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्ने डां. गोविन्द केसीले आफूले पढाउने अथवा काम गर्ने अस्पतालभित्रको अवस्थाबारे जानकारी नभएको हो कि ? देखेर पनि बेवास्ता गरेका हुन् ? source onlinedabali